Dr. Tint Swe's Writings: Cytomegalovirus (CMV) ဗိုင်းရပ်စ်
Cytomegalovirus (CMV) ဗိုင်းရပ်စ်
ဆရာ ရိုသေလေးစားစွာစာရေးအပ်ပါသည်။ ကျမရဲ့တူကလေး အသက်က (၈) လ ခဏခဏဖျားနေလို့ မန္တလးကုတင် ၅၅ဝ ဆေးရုံမှာတက်လိုက်တော့ ဆီး သွေး သလိပ် အကုန်စစ်လိုက်တာ အောက်ကပုံအတိုင်း အဖြေထွက်လာပါတယ်ဆရာ။ CMV Weakly Reactive ဆိုတော့လည်း သိပ်စိုးရိမ်စရာမလိုဘူး လို့ပြောပါတယ်ရှင့်။ ဆရာဝန်က ကုတဲ့ဆေးမပေါ်သေးဘူးလို့လဲပြောတယ်။ မိခင်ဝမ်းတွင်းကတည်းက ပါလာတဲ့ရောဂါလို့ပြောပါတယ်။ ရောဂါပြင်းလာရင် မျက်လုံးတွေစွေသွား ခေါင်းတွေကျုံ့သွားတယ်လို့လည်းပြောတော့ အရမ်းစိုးရိမ်မိပါတယ်ဆရာ။ ကုလို့ရတဲ့ရောဂါလားဆရာ။ ဘာတွေ ဆောင်ရမယ် ရှောင်ရမယ် လမ်းညွှန်ပေးပါဦးဆရာ။
Herpesvirus group အုပ်စုဝင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုဖြစ်တယ်။ herpes simplex virus ရေယုံ၊ varicella-zoster virus (chickenpox) ရေကျောက်နဲ့ Epstein-Barr virus (infectious mononucleosis) ဗိုင်းရပ်စ်တွေနဲ့ အုပ်စုတူတယ်။ ပိုးရှိနေသူရဲ့ ဆီး၊ သွေး၊ တံတွေး၊ သလိပ်၊ နို့ရည်ထဲမှာပါနေနိုင်တယ်။ အတူနေသူတွေကို ကူးစက်နိုင်တယ်။ လိင်လမ်းကနေလည်းကူးတယ်။ သွေးကနေကူးတာအလွန်ရှားတယ်။ ကူးစက်မြန်ရောဂါတော့ မဟုတ်ပါ။ အဲလိုကလေးကိုပြုစုရသူ လက်ကိုခဏခဏဆေးရမယ်။ ရိုးရိုးဆပ်ပြာနဲ့ရေသုံးရင်ရတယ်။
အသက် ၄ဝ အရွယ်တွေ ၅ဝ-၈၅% ဒီပိုးရှိကြတယ်။ ကလေးတွေ မွေးကာစမှာကူးစက်ခံရတတ်တယ်။ နာတာရှည်အဖျားနဲ့ အသည်းနည်းနည်းရောင်တာဖြစ်မယ်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရရင် တသက်လုံးသူ့ကိုယ်ထဲမှာရှိနေမယ်။ ဆောရီး။ ခုခံအားနည်းချိန်မှာ ရောဂါပြန်ပြန်ထတယ်။ ဥပမာ ကင်ဆာဆေး၊ ခုခံအားကျဆေး။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတုန်းမိခင်ကိုကူးရင် အထဲကကလေးဆီရောက်လာနိုင်တယ်။ ကလေးမှာ ကိုယ်အလေးချိန်နည်းမယ်။ အသည်းကြီးနေမယ်။ ဘေလုံးကြီးနေမယ်။ အသားဝါမယ်။ မွေးစကလေးဆိုရင် ဆံပင်ပါးနေမယ်။ မျက်စိမူမမှန်ဖြစ်မယ်။ စိတ်မူမမှန်ဖြစ်မယ်။ ခေါင်းသေးမယ်။ တက်မယ်။
တချို့ ကလေးနည်းနည်းကြီးလာမှဖြစ်မယ်။ ကိုယ်ပူမယ်။ ဝမ်းပျက်မယ်။ နူမိုးနီးယားဖြစ်မယ်။ အစာလမ်းအနာဖြစ်မယ်။ အသည်းရောင်မယ်။ ဦးနှောက်ရောင်မယ်။ အမူအယာပြောင်းမယ်။ တက်မယ်။ သတိလစ်မယ်။ မျက်စိထိခိုက်မယ်။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးနဲ့ သေဆုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆောရီး။
ကလေးကြီးလာချိန်မှာ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တာတွေ သတိထားရမယ်။ ဖြစ်နိုင်တာတွေက မတူကြပါ။ CMV mononucleosis မိုနိုနယူကလီယိုးဆစ်၊ Intestinal complications အူ၊ Liver complications အသည်း၊ Nervous system complications အာရုံကြောစနစ်၊ Lung complications အဆုပ်။
ဗိုင်းရပ်စ်ကိုသေစေတဲ့ဆေးမရှိပါ။ ဆောရီး။ ကုသနည်းလည်းသတ်သတ်မှတ်မှတ်မရှိပါ။ နုမိုးနီးယားဝင်လာရင်တော့ ပိုးသေဆေးစတာလိုမယ်။ တချို့ကို ဗိုင်းရပ်စ်ဆေးပေးတယ်။ အဲလိုဆေးက ဗိုင်းရပ်စ်တွေ မပွါးများအောင်သာ လုပ်ပေးနိုင်တယ်။
Well Done လူမရောက် အလှူရောက်၏
Gallbladder cancer သည်းခြေအိတ်ကင်ဆာ
Uses for Vinegar ဗနီဂါအသုံးပြုနည်းများ
Bleeding သွေးယိုခြင်း ရှေးဦးသူနာပြု
Electric shock လျှပ်စစ်ဓါတ်လိုက်ခြင်း
Panic Disorder စိတ်မထိန်းနိုင်ခြင်း
Government Policy အစိုးရပေါ်လစီ (သို့) ပညာရှင်များသ...
Choose Your Words ခုတမျိုး တော်ကြာတမျိုး
Choking First aid ချုပ်ရရင် ဘာလုပ်ရမလဲ
Floating Water Hyacinth ဗေဒါက တပင်တည်း
Cancer risk factors ကင်ဆာ ဘာလို့ဖြစ်ရသလဲ
ဆေး၊ ကွမ်းယာနဲ့ ကျန်းမာရေး
Conference on Look East Policy
Tobacco kills ဆေးလိပ်က လူကိုသတ်နေတယ်
An Open Letter အိတ်ဖွင့်ပေးစာတစောင်
Bras and Breast Cancer (ဘရာစီယာ) နဲ့ (ဘရက်စ်) ကင်ဆာ
Be My Guest ဧည့်သည်
Flower bud အငုံအဖူး
Butcher of Depayin ဒီပဲယင်းအရေးအခင်း လုပ်ကြံခဲ့သူများ
Neem Seeds ချိုတာလို တမာကိုထပ်မစိုက်ပါနဲ့
Three Generations မျိုးဆက်သုံးဆက်
How much to reveal ဘယ်အထိဖေါ်မလည်း
Birds ofafeather flock together ရတနာရှိရာ ရတနာလာ
Bygone Surgeon ခွဲတဲ့ဆရာဝန်
Birth Pills ကိုယ်ဝန်တား စားဆေးများ
Believe It or Not ကဲ ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ
Antibiotics for Acne ဝက်ခြံအတွက် ပဋိဇီဝဆေးများ
Second Language ဘိုလိုပြောတော့ ဗိုလ်ဖြစ်ရော့လား
I love Tennis တင်းနစ်
Your Height အရပ်ရှည်တိုင်းကောင်းသလား
Two Chapters (ချပ်ပတာ) နှစ်ခု
How People Camouflage Works ပြောင်းတတ်သူများ
1990 Election Result ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲ
One-Sided Arguments မဟာအမှားကြီး
Natural family planning သဘာဝနည်းများနဲ့ ကိုယ်ဝန်တာ...
Popular Posts အဖတ်အများဆုံးစာများ
Vaccination question ကာကွယ်ဆေး အတင်းထိုးခိုင်းသင့်...
Trastuzumab (Herceptin) ရင်သားကင်ဆာဆေး
Pregnancy and Ultrasound ကိုယ်ဝန်ဆောင် (အာလ်ထွာဆော...
Doctor’s White Coat ဆရာဝန်ဂျူတီကုတ်
Dress code ခါးတောင်းကြိုက်ယူနီဖေါင်း
Lariam for troops ငှက်ဖျားဆေးနဲ့ စစ်သား
Phaung Gyi ဖေါင်ကြီး
To my brother ငါ့ညီပြောင်းဝင်း
Pregnancy at 20, 30, 40 အသက်ဘယ်လောက်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆေ...
Hepatitis B Vaccine Guideline ဘီပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးနည်း
Analytical View ခွဲမြင်ကြပါ
Antibody Levels and Protection after Hepatitis B V...
U.S. Presidents Ranked By IQ အမေရိကန်သမတ (၂၄) ဦးတ...
Just 14-year မေးခွန်းတခု
I can only say thank you ပြောနိုင်သလောက်သာ ပြောပါမယ်
Healthy habits ဘယ်လမ်းရွေးမလည်း
Goodwill machine မုန့်လုံးရေပေါ်
Language is the Key ဘာသာစကားနဲ့ စာအရေးအသား
Burmese language ပြောင်လျှက်ဝင်းလျှက် ကျန်စေတည်း
Tit or Ta အနန္တသူရိယ မှားသလား
China denies selling human flesh as tinned corned ...
Rich men’s Club ဘောလုံးနဲ့ချမ်းသာသူများ
E-Cigarette အီး-စီးကရက်နဲ့ ကျန်းမာရေး (၂)
E-Cigarette အီး-စီးကရက်နဲ့ ကျန်းမာရေး (၁)
I may be wrong ကျွန်တော် မှားချင်မှားမယ်
Hair saloon ဆံသဆိုင်နဲ့ ကူးစက်ရောဂါ
Foreign Policy နိုင်ငံခြားရေး
Butt Better Body အောက်ပိုင်း-နောက်ပိုင်း လေ့ကျင့်ခန်း
Butt exercises for women အောက်ပိုင်း ဖွံ့ထွားလိုလျှင်
Alcohol withdrawal syndrome အရက်ဖြတ်လိုက်ရင်
Bell's palsy မျက်နှာတခြမ်း လေဖြတ်ခြင်း
The World's Most Generous Nation အရက်ရောဆုံးနိုင်ငံ
Your Excellency အဆွေတော်
Dehydrated Burmese ခြောက်ကပ်ကပ် မြန်မာစာ
My Wishes ကျန်းမာကြပါစေ
100 Days ရက် ၁ဝဝ
Medicines for Bacteria ပိုးအုပ်စု၊ ပိုးအမျိုးအစား၊...
Heavy Sigh ဟင်းကနည်း သက်ပျင်းချခြင်း
Transgender လိင်ပြောင်းခွဲစိတ်မှုနဲ့ ကိုယ်ဝန်
Out of the EQ and IQ
Doctor-patient relationship (3) ဆရာဝန်-လူနာ ဆက်ဆံေ...
Doctor-patient relationship (1) လူနာ-ဆရာဝန် ဆက်ဆံေ...
Ovulation test မျိုးဥ ထွက်-မထွက် စမ်းနည်း
Kegel Exercise for Women (ကီဂယ်လ်) လေ့ကျင့်ခန်း
Shut your Mouth တေမိမင်းသား